चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथिको छलफल गगनको फरक मतमा केन्द्रित, अर्को बैठक बुधबार – Health Post Nepal
२०७५ पुष २३ गते १५:५४
उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदन नसच्याए तत्काल अनशन थाल्ने डा. केसीको घोषणा
चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन डा. केसीसँग छलफल गरिने, गगन र योगेशले पाए जिम्मा
चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका लागि सोमबार बसेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक समितिका सदस्य एवम् कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा राखेको फरक मतमा केन्द्रित भएको छ । विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याउन थप गृहकार्य आवश्यक भएको भन्दै समितिको बैठक बुधबार बिहान साढे १० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
लामो समय समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा सहमतिका लागि छलफल भए पनि आइतबार मतविभाजनको प्रक्रिया अपनाई बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरी समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । सोक्रममा सत्तापक्षीय सांसदहरूले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलगायत विषयमा चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसित सरकारले गरेको सम्झौताविपरीतको अडान कायम राखेर बहुमतको बलमा प्रतिवेदन पास गर्न खोजेपछि सांसद थापाले फरक मत राखेका थिए । उनको फरक मतलाई प्रतिवेदनमा फरक मतकै रूपमा रखी समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सोमबार १० भन्दा बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सत्तापक्षीय सांसदहरू सरकार र डा. केसीबीचको सहमति प्रतिकूल हुने गरी आएको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई हुबहु पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने थापासहित सत्तापक्षीय ३ सांसदले सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौता र सो सम्झौताका आधारमा नेकपाकै सचेतक माननीय देव गुरुङले विधेयकमाथि हालेको संशोधन प्रस्तावअनुरूप संशोधन गरी विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यस्तोमा सहमतिमै विधेयक पारित गर्ने प्रयासस्वरूप समितिकी सभापति माननीय जयपुरी घर्तीले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छिन् ।
यस्ता छन् गगनका फरक मत
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिपक्षी संसद गगन थापाले राखेको फरक मतमा मुख्यतः तीन–चारवटा विषय छन् । उनले विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा आयोगको नाम जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसैगरी, उपत्यकाबाहिरको हकमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिने विषयमा अहिलेका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने उनको मत छ । साथै, चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा विधेयकमा राखिरहनुनपर्ने मत उनले राखेका छन् ।
त्यसैगरी, १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेज सेवामूलक हुनुपर्ने र यसबीचमा खुल्ने कलेजका हकमा खुलेकै दिनदेखि सेवामूलक हुनुपर्ने मत उनले राखेका छन् ।
Tags: चिकित्साशिक्षा विधेयक